Chikumi 5, 2018 arun
Coinbase anowedzerawo kuti Japan
Coinbase akazivisa urongwa aro nokuparura muhofisi muJapan. Munguva chiziviso, Coinbase akati vari kushanda pamwe chete Japanese FSA kuitira pamutemo uchiwirirana Panguva ose uye kamwe mvumo, anoronga kupa zvigadzirwa zvavo uye mabasa kune vanhu Japan.
Anogamuchira Fintech Leader Nao Kitazawa
Sezvo chikamu nesimba kwedu mhanyisa yose kuitwa cryptocurrency, nhasi tiri kukuzivisai kushanda Coinbase raMwari hofisi muJapan. Under utungamiriri zvikuru-airemekedzwa uye kuyemurwa fintech mutungamiri, Nao Kitazawa, hofisi yedu itsva nheyo muJapan crypto vanoita kuwana zvakawanda Coinbase kuti zvigadzirwa. Sezvo dzimwe mumisika, isu vanoronga kutora nzira nemaune rollout redu Japan, izvo zvinoreva kushanda ruoko-mu-ruoko pamwe Japanese FSA kuitira zvaidiwa mitemo yemunyika Panguva ose.
Brazilians Munotadzanura zvakawanda crypto zvokutengeserana nyaya pane chinyakare brokerage nyaya
More vanhu Munotadzanura cryptocurrency zvokutengeserana Nhoroondo muBrazil pane chinyakare brokerage nyaya.
A gore rakapera, kuchitsinhanisa inonzi Foxbit akanga nehasha 100,000 vakanyoresa vanoshandisa. nhasi, vane 400,000 vakanyorwa vanoshandisa kubva vanofungidzirwa 1.4 miriyoni kuti ndashama zvemari navo uye dzavo vakwikwidzi huru matatu mumakore asingasviki maviri 'nguva. Enzanisa kuti kune nehasha 600,000 vane wemari brokerage nhoroondo uye zviri pachena kuti aone: Brazilians akaona cryptocurrency. mu 2016, Brazilians kuzununguswa $160 mamiriyoni uye kubva Bitcoin. Gore rapera, yandirova kumativi $2.4 bhiriyoni.
"Nokuti varume vaishandisa kuvanza madhora pasi nemamatiresi dzavo, zvino vari vakavanda muna Bitcoin,"Anodaro Eduardo Ferreira, musoro dzakawanda mabhizimisi kukura nokuda Foxbit muLondon. "Ndicho vadzidzi kutenga nayo. Ndicho vatyairi-makore 60 bhazi," anoti.
Kraken Daily Market Mushumo 04.06.2018
$150M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Amazon akunda munhu bhabhadzira ...